windows7Build 7601 This copy is nor genuine - MYSTERY ZILLION
windows7Build 7601 This copy is nor genuine
naykyaw777 July 2012 edited July 2012 in Daily Life windows7Build 7601 This copy is nor genuine တဲ့ကျေးဇူးပြုပြီး​ေ​ြာပြပေးပါအုံး Tagged:
K July 2012 Moderators Yes, that's because your windows in Pirated! Simple... darkness0zack August 2012 Registered Users ဝင်းဒိုးက လိုင်စင် version မဟုတ်လို့ပေါ့။ crack loader ရှိတယ်။ လိုချင်လားမသိဘူး။ အဲဒါလုပ်လိုက်ရင်windows7Build 7601 This copy is nor genuine ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူး။ မလုပ်ရင် ဝင်းဒိုးက ရက် ၃၀ ဘဲသုံးရမှာ။ naykyaw777 August 2012 Registered Users လိုချင်ပါတယ် အစ်ကို ဖြစ်နုင်ရင် ကျနော့်ကို [email protected] ကိုပို့ေးပါလား 99poison August 2012 Registered Users @naykyaw777 Download this software : http://goo.gl/6GyYRBefore u running ,1. Disable firewall ( Start > type firewall in search box >click check firewall status and turn off )2. Disable anti-virus3. Disable windows update(Control Panel\_System and Security\_Windows Update\_Change settings)4. Restart your computer5. After restart , Disable anti-virus, 6.Now, you can run this program and click Apply Good luck brother :-) darkness0zack August 2012 Registered Users http://www.mediafire.com/?p1m1mc6udmoj64jရသွားပြီလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်upload လုပ်ပြီးပြီ။ နောက်ကျသွားတော့ ဆောရီးဘဲ။ mediafire နဲ့လုပ်ထားတယ်။ သတိထားဖို့က antivirus ပိတ်ထားရမည်။ စစချင်း တံဆိပ်ရွေးရမယ်။ ကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်။ ပြီးရင် install7loader ဆိုတဲ့ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ installing please wait ပေါ်လာရင် ခနစောင့်ပါ။ ပြီးရင် ၀င်းဒိုး restart ကျလိမ့်မယ်။ restart ချပြီးရင် win key + pause Break key တွဲနှိပ်ကြည့်လိုက် system properity ပေါ်လာပြီး windows is activated လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့အီးမေး [email protected] ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ naykyaw777 August 2012 Registered Users ေျဖေပးတဲ့ အစ္ကိုႏွစ္ေယာက္လံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ က်ေနာ္99poison တင္ေပးတဲ့အတိုင္းလုပ္လိုက္တာအဆင္ေျပသြားပါျပီ ခင္ဗ်ာ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla